Agoonta Maanta iyo Agab laawayaasha haysta!
Ilma yar oo asagoon qaangaarin,caqlisan islamarkaasna ka adkayn inuu helo wixii aabbihi ugu fillaa ayaa loogu yeeraa Ereyga (Agoon). Inkastoo haddana qof walba oo Odaygii dhalayi dhintay ladhoho waa Agoon.
Sikastaba ha ahaatee ujeeddada haatan aan kaleeyahay Ereyga [aqoon] ma ahan kii looyaqaanney ee ahaa [Aabbalaaway], laakiin waa agoon kaduwan kaas.
Markaad sifiican umilicsato Cinwaanka uu xanbaarsanyahay Maqaalakan, waa Laba erey ama laba magac oo kala ah: Agoon iyo Agablaawayaal.
Sida Caadadaah, ama ilaahayba Aadanaha u abuuray waa inay xor ahaadaan, ka ahaadaan xor Ilaahay wixii kasoo haray oo dhan.
Haddii marka taas lawaayo oo qofku u ahaan waayo xor Adeegisiga Awoodihiisa Muruqeed,Maskaxeed iyo waliba Maaleed Ee uu leeyahay, Ilaahaygii abuurtana uusan ka xayirin, laakiin Aadane lasimani udiiday oo kahor istaagay, soo arrinku maahan aan ku Addoonsado alle sokadi? Oo aan koontaroolo Gacantana ku hayo guud ahaan noloshaada oodhan! Anoo waliba kaala siman Dhinacyada kala duwan ee Aadanuhu kakoobanyahay, oo haddii aadan saasyeelin, sandulle ayaan kugu yeelsiin! Oo seedahaan kaagaraacin ilaa aad ka oggolaato taladayda!!?. Tolow Arrinku layaabbadanaa oo Ninku indha adakaa!.
Nin ayaa laga sheegay: waxaan layaabaa Duddunta intaas le,eg Aboor baa dhisay, waxaase igala yaabbadan habaynkii buu dhisaa waxaana ugu yaabbadan ayuu yiri calyadiisa ama candhuuftiisuu kudhisaa!…..haatan aan kuutaliyo oo Gacmaha laabo, sandulle iyo karbaashna aan kuugu taliyo,islamarkaasna waa kula sinnahay soo wax lagu qoslo lalana yaabo maahan.?
Shakhsi ciilkaas labaday ma u egtahay in uu u adkaysanayo arrinkaas? In inteese le,eg buu u adkaysan karaa oo qarsanayaa ciilkaanbigaas? Kiise aan u adkaysan Karin oo Abuuriddiisu ayan aqbalayn dulli kunoolaanshaha ama halagu lahaado sidii xoolihii kaasi muxuu samaynayaa?.
Ilmihii waayay wax tarkii iyo wehelkii Aabbahood marhaddii layiri waa Agoon, soo micnaha agoonnimadu maahan Naaqusnimo kusoo kororta qofka, Dhaawacna ugaysata Damiirka,Dadnimada,iyo Dulqaadka qofka? Tafsiirka Agoonnimadu saas hadduu yahay soo kuma habboona- kan waayay ama lagu tuntay xaqii uu ulahaa inuu noolaado- in ladhoho Agoon
Warkii oo qeexan arrinku waxaaweeye: Agoon oo ah lahaystayaasha laga xayiray Xurmadii iyo Xaqdhowrkii ay u lahaayeen inay noolaadaan, iyo Agablaawayaal oo ah haystayaasha Bahalnimada ku ruugaya xaqii iyo xisaabtii kuway ka adkaadeen.
Haddaan si kale udhigo :Agoonta oo ah shacabka ama rayidka hoosjooga Qabqablayaasha khayrka daran iyo Agablaawayaal oo ah Qabqablayaashaas iyo Beelaha ay kasoo jeedaan, oo xukun Xalaasha kafog haysta oo waliba salad iyo soo kudaraya!!.